Ku -xigeenka Forex Macnaha Buuxa | Sida Looga Sameeyo Lacag Badan 2022
Bogga ugu weyn Ku -xigeenka Forex Macnaha Buuxa | Sida Looga Sameeyo Lacag Badan 2022
Isha sawirka: canva.com (pro)
Forex Entourage waa shirkad soo bilaabatay 2016. Ganacsigu wuxuu diiradda saarayaa sidii waxbarasho iyo tababaro loo siin lahaa xubnaha ka ganacsanaya suuqa sarifka calamiga ah.
Forex Entourage waxay aaminsan tahay in qof kastaa baran karo inuu noqdo ganacsade guuleysta. Markaad akhrido, waxaad baran doontaa wax badan oo ku saabsan agagaarka forex iyo sidaad lacag uga samayn karto.
Ka ganacsiga suuqa forex waa khatar aad u sareysa laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa abaalmarin aad u sareysa waxbarashada habboon iyo maareynta halista oo xoog leh. Bulshada xubnaha ayaa ugu horreyn ka kooban ganacsato cusub iyo kuwa cusub oo hadda baranaya xirfadaha loo baahan yahay in lagu ganacsado Forex.
Wax soo saarka shirkadda waxaa ka mid ah ilaha waxbarasho, iyo Autotrader oo loo dejin karo inuu kaa ganacsado koontadaada intaad ka maqantahay ama ka maqantahay, nidaamka digniinta calaamadaha ganacsiga, uguna dambaysay barnaamij cusub oo la soo saaray oo loo yaqaan 'PAP' kaasoo u diro digniino joogto ah iyo kuwa soo noqnoqda markasta fursadaha ganacsi ee ixtimaalka sare ayaa lagu arkay suuqa forex.
Forex Entourage waxay kaloo bixisaa barnaamij suuqgeyn shabakad oo u oggolaanaya xubnaha inay dhisaan dakhli haraaga ah iyagoo la wadaagaya ganacsiga dadka kale. Kani waa MLM cusub oo laga bilaabo Maarso 2017 ay ka yar yihiin 3000 xubnood, waana bilowgii fursadiisii ​​kobaca weyn.
Siyaabo fudud oo aad ku heli karto abaalmarinta forex Entourage
Ganacsiga maalinta waa hab fiican oo lagu sameeyo dakhli yar oo dhinaca ah ama sida dariiqa shaqo ee weyn. Jiho kasta oo aad doorato, meesha laga bilaabayo waa isku mid. Maqaalkan waxa si gaar ah loogu qoray akhristayaasha Soo dhawaynta Qarsoon.
Tani waxay noqon doontaa hab aad u toos ah iyo 123 habab si loo bilaabo ganacsiga Forex Trading (Currency Trading). Waxaan u qaadan doonaa inaad ogtahay waxa uu yahay ganacsiga sarifka calamiga ah (currency trading) iyo inaad garanayso sababta aad u doonayso inaad uga ganacsato suuqa sarifka calamiga ah.
Tusaale ahaan, waxaad dooneysaa inaad lacag ku kasbato fekerka ah in Peso-ka reer Mexico uu heli doono 5% sanadka soo socda, marka waxaad dooneysaa inaad hadda iibsato Pesos kadibna aad dib ugu celiso Doolarka Mareykanka sanadkii gudihiisa 5% faa'iido ah. Tusaalahan fudud ayaa ah sababta ay dad badani u ganacsadaan lacagaha iyada oo ay ugu wacan tahay fududaynta ganacsiga.
Suuqa Forex runtii waa mid ka mid ah suuqyada ugu fudud ee la fahmi karo oo la bilaabi karo ganacsi. Tani ma sahlayso in si macaash leh looga ganacsado, ee waa sahlan tahay in la barto sida ay u saamayso maalgashigaaga.
Sida loo bilaabo ganacsiga Forex
Waxaan ku bilaabaynaa helitaanka goob ganacsi. Waxaa jira qaar badan oo halkaas ka jira iyo kuwa aad rabto in aad raadiso waa kuwa bixiya xisaabaadka demo lacag la'aan ah iyo barnaamijyada dhimista sida FIPRebates.com.
Waxaa jira dillaaliin badan oo halkaas jooga oo bixiya demos, laakiin FIPRebates waxay bixisaa demos oo lagu daray dhimis. Maxay muhiim u tahay dib -u -dhiska? Hagaag, markaad bilowdo ganacsigaaga tooska ah, waxaad bilaabi doontaa inaad barato waxa ay ku kacayso inaad dhigto meheradahaaga (faafintaada).
Barnaamijka lacag-celinta ayaa dib kuugu soo celin doonta kharashyada qayb ahaan. Aad bay muhiim u tahay inaad tan tixgeliso ka hor intaadan bilaabin ganacsigaaga, maadaama ay kuu noqon karto dakhli kale oo dakhli ah oo waliba kuu oggolaanaya inaad xiriir la dhisto dillaalkaas.
Dadka intooda badan ma oga in sifadan marka ay ganacsi sameynayaan, laakiin waa aragti yar oo loogu talagalay akhristayaasha SE si ay uga caawiyaan inay noqdaan ganacsato faa'iido leh.
Inta badan waxaad heli doontaa madal la yiraahdo MT4. Marka ugu horeysa ee aad furto barnaamijka, waxay ku weydiin doontaa inaad buuxiso macluumaadkaaga sidoo kale waxay yeelan doontaa hoos-u-dhacyo sida leverage si aad u isticmaasho; U daa kan sida caadiga ah.
Waxa ay tahay inaad sameyso waa inaad ku ganacsato cabbirka dhabta ah ee koontada aad rabto inaad ku ganacsato lacag nool, maadaama aad u baahan tahay inaad halkaan macquul ka noqoto. Haddii aad dareento in deebaajigaaga lacagta tooska ahi uu noqon doono $ 10K, dooro ikhtiyaarka $ 10K.
Ujeedada tan ayaa ah si aad u noqoto mid raaxo leh ka ganacsiga qiimahan oo aad aragto koritaanka suurtagalka ah iyo halista ku lug leh dheelitirka xisaabta.
Waqtigan xaadirka ah raac shaashadaha oo sii wad inaad ku rarto madal. Adeeggu wuxuu abuuri doonaa isticmaale oo wuu kuu gudbin doonaa. Waxaad tixraaci kartaa macluumaadkan tabka “sanduuqa boostada” ee u dhow shaashadda madal.
Hadda oo barnaamijkaaga la rakibo oo aad ka arki karto dheelitirkaaga bilawga hoose ee shaashadda, waxaad diyaar u tahay inaad ganacsi hesho! MT4 waa nidaam ganacsi oo aad loogu jecel yahay Forex.
Haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan waxyaabo gaar ah, waxaa jira fiidyowyo badan iyo casharro intarneedka ku saabsan. Ujeedada maqaalkan ayaa ah in la sharaxo sida loo sameeyo ganacsi iyo waxa loola jeedo dheelitirkaaga.
Halkaa marka ay marayso, waxaad eegi doontaa goobta shaqada ee caadiga ah iyo shaxda. Tani waa waxa ganacsatada intooda badani ay isticmaali doonaan si ay ganacsigooda ugu saleeyaan. Markaad barato jaantuska, ganacsatadu waxay awoodaan inay go'aamiyaan dhaqdhaqaaqa suurtagalka ah.
Macluumaadkan ku saabsan jaantuska Meta traderbe waxaa loo keydiyay maqaal kale. Hadda, waxaanu eegi doonaa oo kaliya in la meel dhigo ganacsi ku salaysan dareenkaaga sida tusaale ahaan Peso.
Hadda ka hor intaanan meel dhigin ganacsiga EUR / USD, waxaad u baahan tahay inaad ogaato meesha aad ka heli karto jaantuska ganacsiga. Gudaha goobta Metatrader, waxaad arki doontaa calaamadaha iyo qiimaha dhinaca bidix ee goobta. Tan waxa loo yaqaan "watch market".
Haddii aad eegto saacaddan suuqa, waa inaad aragtaa lammaanaha EUR/USD; midig-guji halkaan waxaadna arki doontaa dhammaan xulashooyinka aad ku arki karto jaantuska ama aad ku iibsan karto una iibin karto labadan lamaane
Markaad meherad dul dhigto masraxa waxaad haysataa dhawr ikhtiyaar oo ah qiimaha qandaraaska. Qiimayaashan waxaa loogu yeeraa: micro, mini, iyo standard. Tiro yar ayaa ka dhigan $ .10/sax (geli sida .01 oo ku taal barxadda), marka saxar kasta ama dhibic kasta dhaqaaq, waa $ .10.
Tiro yar ayaa ka dhigan $ 1/sax (geli sida .1 madasha), marka dhibic kasta oo la dhaqaaqo waxay noqon doontaa $ 1, iyo saamiga caadiga ah wuxuu ka dhigan yahay $ 10/sax (geli 1 madal).
Markaa, waxaan go'aansannaa inaan iibino ama "gaabinno" EUR -ga oo aan dhigno 1 heer oo caadi ah ama qiimaha heshiiska. Haddii EUR/USD ay hoos uga soo degto 100 dhibcood, waxaad samayn lahayd $ 1,000 ($ 10 x 100).
Waxa ugu weyn ee ku saabsan Forex waa in 100 dhibcood ay ku jiri karaan daqiiqado gudahood, ama maalin gudaheed. Taasi waa sababta dad badani ugu qulqulayaan Forex sababta oo ah kartida. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad fahanto in isla faa'idada ay sidoo kale u dhigantaa isla khasaaraha.
Meesha laga bilaabayo cabbirrada badan: Haddii aad leedahay akoon $1,000 ah, waxa fiican in aad ku bilowdo micro lots, marka aad gaadho $5,000 – $20,000 akoon 1 mini ayaa ugu badbaadsan. Tan korkeeda, waxaad si badbaado leh ku bilaabi kartaa ganacsigaaga 1 standard, laakiin ka digtoonow inta uu le'eg yahay khasaaraha joogsigaagu iyo faa'iidada aad ka qaadanayso.
Dilaaliin badan ayaa kuu oggolaan doona inaad lumiso 20% koontadaada ka hor intaadan kuu xirin booska. Tani waxay ka dhigan tahay haddii aad leedahay koonto $ 20,000 oo aad ka ganacsato 1 saamiga caadiga ah, waxay qaadan doontaa 400 dhibcood (20% of $ 20K = $ 4,000 ~ 1 lot lot = $ 10 x 400) jihada qaldan ka hor intaadan si toos ah kuugu xirmin ganacsi. Ka digtoonow boqolleydan marka aad wax iibsaneyso, tan waxaa loogu yeeraa "Margin".
Waxa ay tahay inaad sameyso markaad lacag ka hesho Forex Entourage
Haddii aad isweydiiso su’aashan, waxaad ku dhacaysaa tirakoobka ay ganacsatada badankoodu ku dhacaan, taas oo adeegsanaysa shucuur si aad uga baxdo jagooyinkaaga.
Waa inaad isweydiisaa xaaladdan marka ay timaado heerarka qiimaha xiga ee meesha qiimuhu ku dhibtoon doono inuu jebiyo. Tani waa barta laga baxo. Ha u oggolaan shucuurtaadu inay kaa fiicnaato markaad wax iibsaneyso.
Waxaad u baahan tahay inaad fiiriso suuqa Forex oo leh shucuur ka yar suuqyada kale, badanaa sababta oo ah suuqani waa mid aad u ballaaran oo way adag tahay in lagu wareejiyo suuqan xanta / ganacsatada shucuurta leh.
Waxa kale oo aad haysataa ikhtiyaar inaad kaga baxdo khatarta adiga oo u wareejinaya joogsiga qiimaha gelitaanka haddii ay dhacdo in qiimaha soo noqdo uu jebin doono xitaa.
Markaad diyaar u tahay inaad ka baxdo booskan, waxaad arki doontaa daaqad dalabka oo ku yaal xagga hoose ee goobta. Daaqaddan, waxaad arki doontaa booskaaga, midig-guji booska aad rabto inaad xidho ama wax ka beddel haddii aad rabto inaad ka baxdo khatarta.
Sarifka calamiga ah iyo ka ganacsiga aqoonta waa mid toos ah. Waxa aad ka heli doonto waxay noqotaa mid adag ama jahawareer waa dhammaan xulashooyinka ay madal ganacsi kastaa bixiso. Markaad dhexda u gasho software-ka, waxay noqon kartaa mid xad dhaaf ah.
Waxaan aad u soo jeedinayaa inaad ku bilowdo xirfado fudud MAYA adeegsiga aaladaha, si aad u aragto sida dhaqdhaqaaqa suuqa u saameeyo dheelitirkaaga. Markaa waxaad bilaabi kartaa raadinta xeelado aad ku ganacsato.
Sida Lacag Loogu Sameeyo Forex Iyada Oo Aan La Ganacsan | 2022
20 Podcasts oo ah Maalgelinta ugu Fiican ee Bilowga ah 2022
Dib -u -eegista Imarketslive 2022: Ma sharci baa mise waa khiyaano kale oo Forex Trading
Hel Qorsheyaal Degdeg ah oo Taajir ah 2022 | Hubso Lacag mar walba.
Sida Loo Bilaabo Meherad Fudud 2022: Hagaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Sida Loo Noqdo Ganacsade Maalin leh $ 100: Tallaabo Tillaabo Tallaabo ah
Ka ganacsiga suuqyada maaliyadeed waa lacagta cusub ee saliidda iyo barashada farshaxanka noqoshada ganacsade maalinle ah…
Ma jirto dood ah in suuqa Forex uu yahay suuqa maaliyadeed ee ugu weyn adduunka. Hadda, waxaad…
Lacag ka sameynta Nadex: 15 Talooyin ugu Fiican Sida ay u Shaqeyso 2021
In lacag laga sameeyo Nadex ma fududa sida ay u muuqato. Xaqiiqdii, waa mid ka mid ah kuwa ugu…
Dib -u -eegista Xulashada IQ ee Daacadda ah 2022: Madal Ganacsi Sharci ah ama Fadeexad Forex?
Waxaa laga yaabaa inaad weli shaki ku jirto in IQ Ikhtiyaarka uu yahay khiyaano ama sharci; si fiican, waa…
Suuqa sarifka lacagaha qalaad waxa uu soo saaray maalqabeeno. Maanta, waxay matalaan mid ka mid ah suuqyada ganacsiga ee ugu weyn adduunka.…